Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment आज बि. सं.२०७७ पुस १४ गते मंगलवारको राशिफल हेर्नुहोस् - Pnpkhabar.com
आज बि. सं.२०७७ पुस १४ गते मंगलवारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज बि. सं.२०७७ पुस १४ गते, मंगलवार, २९ डिसेम्बर २०२०। मार्ग कृष्णपक्ष, चतुर्दशी तिथि (७:४० बजेदेखि पूर्णिमा), मृगशिरा नक्षत्र (१७ः५६ बजेदेखि आर्द्रा), चन्द्रराशि– मिथुन।
रमाइलो जमघटमा स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। बौद्धिक क्षमताको तारिफ हुनेछ भने व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
केही चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी आइलाग्न सक्छ। तापनि मिहिनेतले राम्रो परिणाम दिलाउनेछ। आँटले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा उठाउन सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ।
लोकाचारका लागि अनावश्यक वस्तुका पछि दौडनुपर्ला। सामान्य कामलाई सञ्चित रकम खर्चनुपर्ने हुन सक्छ। आजको यात्रा र आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। वचन पूरा गर्न नसक्दा आलोचित भइनेछ। परिस्थिति र सम्बन्ध अनुकूल बनाइराख्न व्यवहारमा सजग रहनुपर्ला। हडबडीले घर–व्यहारमा समस्या निम्त्याउनेछ। तापनि, प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ।
गलत सल्लाह दिनेहरूले फसाउन सक्छन्, सजग रहनुहोला। सहपाठीहरू प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन्। केही चुनौतीपूर्ण काममा समेत जुट्नुपर्ने हुन सक्छ। पढाइमा गुरुजनको मार्गदर्शन उपयोगी हुनेछ। मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ।